Melite kọntaktị gị na Mac site na ozi sitere na netwọkụ mmekọrịta gị Esi m mac
Melite kọntaktị gị na Mac site na ozi sitere na netwọkụ mmekọrịta gị
Anyị agendas kọntaktị agbanweela ọtụtụ na-adịbeghị anya. Ha na-ebu nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, na ma eleghị anya adreesị nkịtị. Mana n’oge ugbu a, ohere ị ga-esi nweta mmadụ na-aba ụba na mbata netwọkụ mmekọrịta na ọrụ izi ozi. Yabụ, ịnwe kọntaktị anyị emelitere iji kpọtụrụ ha, maka nke onwe na nke ọkachamara, na-echekwa oge dị ukwuu. Enwere ike ịmekọrịta ndepụta kọntaktị anyị nke Mac na data sitere na Social Networks, iji nweta: foto ahụ, aha njirimara, wdg.. Mana nhọrọ a zoro ezo. Ka anyị hụ otu esi eme ya.
The kasị kensinammuo ụzọ ga-abụ iji nweta kọntaktị ngwa na anya n'ihi na "melite kọntaktị" nhọrọ. Ọ bụ eziokwu na nhọrọ a dị, mana ọ bụghị na ngwa kọntaktị ahụ, nke mere na site na ndudue anyị mekọrịta kọntaktị anyị achọghị ka anyị nwee na akaụntụ ahụ. Must ga-agbaso usoro ndị a:
Tonweta Ihe sistemụ. Nyere ya nnukwu ojiji nke m, enwere m ya n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke m nwere ike ikwu. N'ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike ịchọta ya na LaunchPad ma ọ bụ Chakwasa ihie (mepee na oghere Cmd +) wee tinye Mmasị Sistemụ.
Nzọụkwụ nke abụọ bụ ịnweta Ihe ndekọ ntanetị. Ihe nnọchianya ahụ bụ akara na-acha anụnụ anụnụ na akara ngosi dị n’ime ọcha.
Ugbu a anyị ga-achọ akaụntụ Social Network na anyị chọrọ gakọrịta. Dị mkpa, ogwe nke aka ekpe bụ akaụntụ email ma ọ bụ ọrụ - netwọkụ mmekọrịta n'etiti ndị ọzọ - emepụtara. Ọ bụrụ na anyị nwere akaụntụ anyị chọrọ ịmekọrịta emegoro, pịa ya na mmanya na aka ekpe. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị ga-ebu ụzọ mepụta ya, anyị ga-achọ ọrụ na mmanya na aka nri ma anyị ga-edebanye aha ya.
N'ikpeazụ, ozugbo ịpịrị ọrụ na mmanya na aka ekpe, anyị ga-ahụ n'okpuru aka nri, nhọrọ "melite kọntaktị" Site na ịpị ya, kọntaktị anyị na-arụ ọrụ na ozi sitere na ọrụ ahụ ma ọ bụ Social Network.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime otu ihe ahụ na ọrụ ndị ọzọ, gụgharịa usoro a. Ugbu a, ị ga-enwe ọtụtụ ihe ọmụma banyere ndị ọrụ gị anakọtara na ngwa Ndi ana-akpo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Melite kọntaktị gị na Mac site na ozi sitere na netwọkụ mmekọrịta gị
Onye editọ foto na Ego Pro, na nnukwu onyinye maka obere oge
Anyị ga-ahụ ngwaahịa ọhụrụ na Storelọ Ahịa ozugbo ọ mepere? [Nghoputa]